Nhau Blog yeIndian Tagged "Maitiro" - THE INDIAN FACE
Uye iwe, wakaberekerwa chii? Tese tine chinangwa. Isu tichakuudza zvedu: isu takazvarwa kuti tinakidzwe nerusununguko, mutambo uye mutambo. Ichi ndicho chikonzero, muchinyorwa chedu nhasi, isu tichikuudza iwe nyaya ya ngowani dze baseball, uye kuti izvi zvakatikurudzira sei kukuunzirai muunganidzwa "Akazvarwa ku ..." de The Indian Face.
Magirazi anokudza vaongorori vakashandura nhoroondo: Frontier
Uye kwauri, chii chiri miganhu? Kwatiri ivo vanomiririra hushingi hwekuyambuka zvisingazivikanwe, kushinga kuongorora uye kurarama nyowani adventures. Naizvozvo, muchinyorwa chedu nhasi tinoda kukuudza kuti ndiani akatifemera kuti tiunganidze Kumuganhu, ine runyorwa rwevatsvakurudzi vasere avo vakashandura mafambiro enhoroondo.
Inflatable mabhodhi ekudzidzira padenga kufambisa pamusoro maererano nezvaunoda
Uri kufunga nezve kutanga munyika ye Paddle surf? Kana pamwe, iwe uri nyanzvi uye urikutsvaga nyaradzo nekusiyana-siyana? Chero mhinduro yako, muchinyorwa chedu nhasi tinoda kukuratidza zvakanakira inflatable mabhodhi ekugadzira P VAKE,pamwe nezvakanakira kune vese vanoda uyu mutambo wemvura.
ZVINHU ZVINHU ZVINOFANIRA KUZIVA KUSVIRA KAPA
Iwe unoda here chivharo, asi iwe uchine zvimwe zvikahadzika maererano nehunhu hwayo, zvigadzirwa zvacho, kana zvichizokwana kana kwete, kuti ungazvichenesa sei? Muchinyorwa chedu nhasi tafunga kupindura mibvunzo yako yese uye nekukurudzira kuti usarudze yako.
Zvipo zvepamusoro zvevakadzi vanofarira
Kune vese vana vane vanamai vane hushingi uye vane ruzivo: Iyi ndiyo posvo yako Tinokupa iwe 5 mazano muzvirongwa uye zviitiko zvinozoita kuti vanamai vako vakunyungire iwe uye unakirwe nezuva zvizere. Tora mukana uye nyora pasi, nekuti Zuva raamai rinouya.
Zvakanakira kupfeka magirazi ezuva ane lensi tsvuku
Paunenge uchitsvaga magirazi matsva, zvinoenderana nekutanga kwemamiriro ekunze akanaka uye zvakakosha kusarudza chaicho. Magirazi matsvuku ari mufashoni uye ane akawanda mabhenefiti. Tsvaga pano!
TOP 5 zvipo zvezuva rababa Casual sporty fashoni mune dhizaini!
Zvakadaro usingafunge nezve chekupa baba Zuva raBaba iri? Inguva yekubheja pane chimwe chinhu chakasiyana uye chepakutanga. Nezuva rababa ava, kuWedzera iko kubata kwakakosha kuzvipo zvako uye woratidza mitambo yako uye baba vasina rudo-vese kukoshesa kwaanofanirwa. Isu tinokubatsira iwe nezvakanakisa zvipo zvishanu zvekupa paZuva raBaba.
KUGADZIRA! Tsvaga maitiro ekubatanidza magirazi ako egirazi Anoshamisa sarudzo!
Girini iri IN! Inguva yakanaka nguva yekupfeka magirazi ezuva. Ruvara rwegirini, iyo inoratidza yakasikwa, rusununguko uye hutano, ndeimwe yesarudzo dzakanakisa! In The Indian Face Tinoda kukuudza maitiro ekubatanidza magirazi egirazi egirini uye nei ari iwo akanakisa sarudzo kana iwe uchida kubheja pane yakajeka mavara!
Miwani polarUnisex inosimudzira Kune iye uye kwaari!
Magirazi echirimo chimwe chinhu chinotaridzika zvakanaka kwaari uye kwaari. Izvo hazvichadiwe panguva ino kudzokorora kuti izvo zvinopfuura zvekushongedza zvemafashoni, asi kuti zvinotibatsira kudzivirira maziso edu. Kubva The Indian Face tinoda kukuudza kuti sei sarudza magirazi ezuva polarkusimudzwa kwakakosha!
Magirazi ezuva anotonhorera uye makapu erori muna 2020!
Isu tinoziva kuti gore rino 2020 rave riine kujairika. Nekudaro, kubvira The Indian Face®, hatidi kusara tega nezvakaipa. Iri 2020 ravewo zvakare gore rekutora njodzi, rekufara pamusoro pezvinhu zvidiki. Neichi chikonzero: heino nyeredzi zvigadzirwa zvedu zve2020!
Madzimambo ari kuuya! TOP 5 sarudzo dzekupa iyi 2021
MADZIMAMBO VARI KUUYA! Pano tinokuunzira mhinduro yekuratidza zvipo zvako uye kupemberera maMambo kuzere. Tarisa uone izvi TOP 5 sarudzo sarudzo dzisingambokundikana uye izvo zvechokwadi zvichafadza iye akasarudzika munhu anofara!
Magirazi ezuva anozove ari mufashoni muna 2021!
Iyo fashoni yemafashoni yeiyo 2021 inotonhorera kupfuura nakare kose, kubva kune yakasvinuka mavara kusvika kune akajeka kune anonyanya kuwanda masayizi.
Fashoni yeMidzimu yeMidzimu Kapu yako yerori inotaura iwe!
Kapu yako inotsanangura iwe sezvauri uye hunhu hwaunotakura mukati. Iyi ndiyo fashoni, izvi ndizvo The Indian Face® yakafuridzirwa nemitambo iyo inotizivisa isu sechiratidzo uye seuzivi. Takazvarwa tichidzidzira chero mutambo unoita kuti tinzwe tichirarama, mune zvirinani mamiriro. Kana chimwe chinhu chiri nani pane kurarama, chiri kukwanisa kurarama nemanzwiro, kushushikana uye kusimba.
Masangano needu #IndianSpirit vhiki rega rega!
Yedu Indian Crew inoramba ichikura uye iwe uchiziva zvakanakisa? Isu tinodawo kuvimba nemi! Kana mutambo, rusununguko, chishuwo chekunakidzwa uye kunakidzwa zviri chikamu chezuva rako zuva nezuva, usazeze kutibata nesu uye uve chikamu cheichi timu hombe chakagadzirirwa zvese zvakanaka uye zvinonakidza zvinouya zviri kuuya.
Chando magogorosi 2020 Gadziridza yako mask mwaka uno wech ski!
Izvo hazvigoneke kusvetuka kana snowboard pasina iyo ingangoita "yemashiripiti" kubata iyo chando magogorosi ivo vanopa iyo vatasvi. Izvo ski mwaka 2020 usakubata iwe usina kurinda! Pane zvikonzero zvakawanda nei tichifanira kugara tichipfeka magogorosi edu echando zvisinei nenguva yegore. Verenga pamusoro uye uone kuti nei Ski goggles ari fanira!
Tsvaga izvo zvinoitika muSunglasses 2020!
Zvimwe zvakanaka gafas de sol Kana izvozvoinogona kuita mutsauko ... Uye gore rino gafas de sol ivo vane fashoni kupfuura nakare kose! Tidzivirire yakaderera mwaranzi mwaranzi uye kutiita kuti tiratidzike zvinoshamisa nepo tichitaura maitiro edu uye hunhu. Unoziva here kuti ndeapi magirazi ezuva aunofanira kusarudza gore rino? DTsvaga dzinopisa mafashoni, fashoni uye hutano maziso mune magirazi ezuva 2020!
Trucker Hat Wemarori Hat Nei ichizivikanwa zvakadaro?
ari Vatyairi vemarori o Trucker Caps Ivo vakave vakakurumbira mumakore apfuura uye isu tinozviona zvakanyanya uye zviripo pakati pevatambi, vafambi uye kunyange vanozivikanwa pasi rese. Asi isu hatigone kubatsira asi kushamisika kuti chii chinoita chivharo akakurumbira marori? Kunyaradzwa kwako uye nyore? Yakasiyana-siyana uye yakasarudzika manyorerwo? Tsvaga izvo zvikonzero zvishanu zvinoita trucker cap zvakasiyana kubva kune vamwe vese!
Yakasarudzika cap Ratidza maitiro ako uye hunhu!
Hapana chinhu chiri nani pane kuzvidzivirira kubva kuzuva neakanakisa maitiro! Rangarira kuti a tsika chivharo inowanikwa mushure mekubatanidzwa kwakakwana kwekushandisa uye hunhu. Verenga pamusoro uye uone kuti nei makapeti anomiririra mutambi chaiye wauri, uye kuratidza kwako kwese kuda uye hunhu.
Ndiwo akanaka musikana ane cap anotaridzika! Ziva maitiro akanyanya fashoni muna 2020
Vasikana vane mhete dziri kuita kuti ive huru pa internet! Wakambonzwa nezvevasikana vanozivikanwa 'hwakaisvonaka'? Ramba uchiverenga uye uwane zvimwe nezvemafashoni ari pawebhu muna 2020.
Isu takanyora mamwe e hats ane mukurumbira muHollywood Unokwanisa kuvaziva here? Batanidza nesu nguva dzakanakisa dze cinema uko kwechokwadi protagonists vaive hats!
Baseball cap: Wakaenda sei kubva kumitambo yemitambo kuenda kuchinhu chakakosha chetsika yemaguta?
Isu tinopa nzira kune iyo nyaya huru kuseri kwe baseball cap, inozivikanwawo se "baseball cap" kana kungoita "baseball cap", chisakiso chakazove chemhando yemutambo, asi zvakare chinyorwa chezvipfeko zvichiripo mazuva ano.
Vatyairi vemarori. Iyi yezhizha yemafashoni cap
Izwi rekuti "trucker" cap kana "trucker" cap rave richikakavarairwa uye richizivikanwa munhoroondo yese. The mutyairi wemarori Ivo pachavo nguo yakagadzirirwa kuchengetedza musoro uye maziso kubva kumwaranzi yezuva, asi kuburikidza nemakore yave iri iconic fashoni yekuwedzera.